Ruushka oo ku gacan seeray faragelin melateari oo lagu sameeyo xukuumadda Syria – SBC
Ruushka oo ku gacan seeray faragelin melateari oo lagu sameeyo xukuumadda Syria
Posted by Webmaster on June 2, 2012 Comments
Berlin:- Madaxweynaha Ruushka Vladimir Butin ayaa markale ku celiyey sida uu uga soo horjeedo faragelin meltari dalka Syria. waxana uu sheegay in xoog uusan suurtagal ahayn si loo joojiyo dhiiga ku daadanaya dalkaas.
Hadalka madaxweynaha ruushka ayaa ku soo beegmaya xilli xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka Hillary Clinton ay carabaabtay walwalkeeda ku aadan taageerada hubka dowladda ruushka ay u fidinayso maamulka madaxweyne Asad.
Madaxweynaha ruushka oo kulan kula yeeshay ra’iisal wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegay in Russia aysan taageere u fidin dhinacyada ku loolamaya dalka Syria.
Butin oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “ waxaan la leenahay xiriir wanaagsan dalka Syria muddo dheer , balse ma taageereeno dhinacna taasi oo sababi karta dagaal sokeeye.
Madaxweyne Butin ayaa balan qaaday in xukuumadda ruushka ay sameyn doonto wax walbo oo awoodeeda ah six al loogu helo loolanka ka jira dalka Syria.
Butin ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu kala qeyb qaadan doono golaha amaanka arrimaha Syria islamarkaana uu sii wadi doono xiriirka uu la yeelanayo madaxweyne Asad iyo hogaanka Syria iyo madaxda kale ee dowlada carabta.
Madaxweyne Butin ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la sii wado taageerida qorshaha nabadda ee uu hogaaminayo ergeyga gaarka QM iyo jaamacadda carabta arrimaha dalka Syria Koffi Annan.